England vs Brazil: Tababare Southgate Oo Cayaartooyo Da’yar Ciyaarsiin doona | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
England vs Brazil: Tababare Southgate Oo Cayaartooyo Da’yar Ciyaarsiin doona
(14-11-2017) Tababaraha xulka qaranka England, Gareth Southgate ayaa qorshaynaya inuu kulanka Brazil ee caawa kala hortago ciyaartooyo da’yar oo dardar iyo weji cusub ku qaabila xiddigaha dharka Huruudda ah.
Tababare Southgate ayaa sheegay in aanu dayici doonin fursad uu siiyo ciyaartooyada Dominic Solanke, Lews Cook iyo Angus Gunn kulanka caawa, si da’yartani ay u helaan khibrad iyo kalsooni.
Saddexdan ciyaartoy oo da’doodu tahay 20 jirro, ayaa uu tababaruhu soo gelin doonaa qaybta dambe sida la saadaalinayo, waxaase boosaskooda heli doona ciyaartooyada khibradda leh si ay guul uga gaadhi karaan kuwa Brazil ee xoogga ah.
“Saddexdaas wiil waxay ku habboon yihiin garoonka, waxaananu ka caawinaynaa siday garoomada ugu habboonaan lahaayeen. Waa ciyaartooyo fiican oo tababarkana si fiican u qaata.” Sidaas ayuu yidhi Southgate.
Tababaruhu waxa kale oo uu shaaciyey in laacibka khadka dhexe uga ciyaara Tottenham ee Eric Dier uu sii ahaan doono kabtanka ciyaartan ka dhici doonta Wembley, taas oo si toos ah ay shabakadda ciyaaraha ee Cadalool u tebin doono, iyadoo aanu tebinteeda bilaabi doono 10:30 PM oo ah nusasaace ka hor wakhtiga ay bilaabmayso oo ah 11:00PM.
Kulankii Jimcihii uu xalka qaranka England la ciyaaray Germany ee ku dhamaaday barbar-dhaca goolal la’aanta ah, waxa uu tababare Southgate ciyaarsiiyey laacibiin da’yar oo ay ka mid ahaayeen Ruben Loftus-Cheek oo ka tirsan Chelsea balse amaah ugu ciyaara Crystal Palace, goolhaye Pickford oo Crystal Palace ah iyo weeraryahanka Tammy Abraham oo Swansea ka tirsan, halka Joe Gomez iyo Jack Cork ay beddel kusoo galeen.
Isla Jimcihii ciyaaryahannada Solanke, Cook iyo Gunn waxay ciyaarayeen ciyaar xulka qaranka England ee da’doodu ka hoosayso 21 jirku ay 2-0 ku karbaasheen Ukraine, taas daraadeedna may joogin madashii ay isku haleeleen Ingiriiska iyo Jarmalku.